FANONDRANANA AN-TSOKOSOKO : Tandindomin-doza ny mozea eto Madagasikara | NewsMada
FANONDRANANA AN-TSOKOSOKO : Tandindomin-doza ny mozea eto Madagasikara
Harem-pirenena aondran’ny sasany an-tsokosoko ny sokatra.
Nankalazaina ny 18 mey teo ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Mozea teto Madagasikara. Lohahevitra nodinihina ny hoe “Mozea sy ny tantara mampangirifiry. Miresaka ny tsy azo resahina ny mozea”. Tandindomin-doza tanteraka ny mozea sy ny vakoka eto amintsika noho ny tsy fahafantaran’ny olona ny tena lanjany. Vokatry ny tsy fahalalana izay, nanjary manaotao foana ny ireo tsy mahalala, ka mahavita manao fanondranana an-tsokosoko ny haren-tsaim-pirenena.
“Tantara mampangirifiry ho an’ny dimby sy fara no holovain-taranaka satria ho potika tanteraka ny maha antsika antsika”, hoy Radimbilahy Chantal, filohan’ny fikambanana matihanina amin’ny mozea. Raha toa ka mbola manimba ny ala sy manondrana an-tsokosoko ny harem-pirenena ny mponina, toy ny andramena, ny hazomainty, ny biby tsy hita afa-tsy eto Madagasikara… Eo koa ireo harem-pirenena hafa, toy ireo vato sarobidy, aloalo, sary sokitra, ireo harena ambanin’ny tany, toy ny volamena, ny vatosoa isan-karazany, ny any anaty ranomasina, arkeolojika, bibin-dranomasina toy ny soavalindrano…Azo antoka tanteraka fa hamela dindo mampangirifiry ho an’ny taranaka fara aman-dimby izany.
Ahafantarana ny fototra
Nohazavain-dRadimbilahy Chantal hatrany fa “manampy amin’ny fampiroboroboana ny fiarahamonina sy ny fandrosoana ny mozea. Tokony ho fantatra hoe aiza no fototra sy andehanana amin’ny manaraka”. Na eo aza ny ezaka tanterahin’ireo mpisehatra matihanina amin’ny mozea, mbola tsy hita mazava ny politika momba ny mozea eto Madagasikara. Misy ireo harem-pirenena tafavoaka any ivelan’i Madagasikara, saingy mbola lavitra ezaka ny famerenana azy ireny hiverina eto. Manampy trotraka, ny tsy fisiana finiavana avy amin’ny mpitondra. Ny efa teto aza misy mangalatra ary tsy hita tohiny ny famotorana, tahaka ny fahaverezan’ny satro-boninahitry ny Mpanjaka Ranavalona I. Ny toerana manan-kasina tahaka ny Rova misy mandoro. Mby aiza ny fikajiana ny lovam-pirenena izay maha izy azy ny firenena?